Kedu otu esi eji ejiji maka ụlọ ọrụ?
Ọ bụghị ihe nzuzo na ememe nkwonkwo nke ememe dị iche iche na-eme ka ọrụ ọnụ, inyere ndị ọrụ ibe aka ịghọ ndị enyi, na n'ọdịnihu nwere ike imetụta oge ọrụ nke onye ọ bụla. Ịhọrọ uwe maka ụlọ ọrụ ahụ, ọ dị mkpa ịtụle ọdịdị nke ihe omume ahụ, nakwa dị ka iwu eji akwa uwe.
Otu mgbede dị ike na mgbede na ọnụnọ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-achọ ka eji akwa ejiji ma ọ bụ uwe mgbede. Ndị na-amaghị ihe na-achọ ka ị na-ahọrọ uwe, otú ahụ ka ejiji ọkụ, yana ịkwanye uwe, zuru okè ebe a. Ịga eme ememe ncheta ụbọchị ọmụmụ n'ime otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ nke ụlọ obere obere ọrụ, ị nwere ike itinye jeans na ụlọ ọrụ.
Ka anyị tụlee otú e si eji ejiji kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ, dabere na iwu ndị bụ isi nke nchịkwa ụlọ ọrụ:
Isi iwu bụ njide. Mgbe ị na-ahọrọ uwe maka ụlọ ọrụ ahụ kpamkpam wepụrụ: mkpanaka olu, ogologo nke obere, uwe na-egbuke egbuke, ihe na-egbukepụ egbukepụ na nke na-akpali agụụ mmekọahụ na mkpịsị aka.
N'oge na-adịbeghị anya, ndị isi isiokwu aghọwo ndị a ma ama. Ịga na ihe omume dị otú ahụ, gbalịa ịnọ na "isiokwu" ahụ, na-adabereghị n'ozuzu ya. Dịka ọmụmaatụ, ụdị "azụ" ma ọ bụ isiokwu nke oké osimiri chọrọ ijide uwe kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ihe dị n'ime isiokwu a.
I nweghị ike ịpụta na ụlọ ọrụ nkịtị ma ọ bụ uwe nkịtị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị oge ịgbanwe uwe ahụ, mgbe ahụ, akpụkpọ ụkwụ na ntutu isi, isi ma ọ bụ uwe elu, na mmemme ntụrụndụ ga-echekwa ọnọdụ gị, na-enye gị ohere ịnọ n'elu.
Na-eche banyere uwe ị ga-eyi maka ụlọ ọrụ, na-echeta mgbe niile na ọ bụ ihe na-adịghị mma iji ejiji karịa ka onyeisi maọbụ onyeisi gị, ọbụlagodi na i nwere ohere dị otú ahụ. Ihe ndị dị otú ahụ adịghị adaba maka igosipụta ụlọ mposi pụrụ iche na diamond ọnụ.
Ịchọta uwe maka ụlọ ọrụ, họrọ uwe dị mma, ma uwe mara mma, na-ede aha ọma. E kwuwerị, ihe omume ndị a, ọ bụ ezie na ha bụ ndị nkịtị, ma ka na-azụ ahịa. Ọ bụ ya mere, ọrụ kachasị mkpa bụ iji ejiji dịka ọnọdụ ị na-etinye, karịsịa na nnukwu ụlọ ọrụ. Nke a bụ: ọ dị mma maka ndị ọrụ na-eguzo ala na ọkwa ntanetị, ma ọ bụghị mma - ịbụ ndị ka elu. A uwe mgbochi ma ọ bụ uwe ejiji mara mma, ejiji maka ụlọ ọrụ - nke a bụ nhọrọ kacha mma na nke a.
Ihe kachasị amasị ya bụ uwe mmanya, ejiji maka ụlọ ọrụ. Nhọrọ ogologo oge ahọpụtara, ụdị nke mbụ, yana ihe ịchọ mma mara mma zuru oke maka nnọkọ nke ndị ọrụ.
Uwe mgbede dị ogologo ga-adị mma naanị na ụlọ ọrụ azụmahịa. Ebe a na-ewere uwe dị otú ahụ dị ka uwe ejiji ejiji maka mgbede a. N'ọnọdụ ọ bụla ọzọ, ekwesịghị ịhọrọ ụlọ mposi ndị a. Ihe ịchọ mma dị otú ahụ kwesịrị ịdị oké ọnụ, na akpụkpọ ụkwụ na njigide ga-adaba na ya. Ịmecha onyinyo ahụ kwesịrị ịbụ ntutu isi na ntinye, ọ bụ naanị ndị ọkachamara na-eme.
Uwe ejiji oge ochie, ejiji maka ụlọ ọrụ bụ ihe ekike zuru ụwa ọnụ, nke kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Uwe ejiji na ihe ịchọ mma a na-ahọrọ nke ọma ga-eme ka "foto" azụmahịa nke ị mepụtara wusie ike.
Na-ewepụ akpụkpọ ụkwụ maka ụlọ ọrụ, cheta na ọ bụghị naanị na ọ ga-abụ ọmarịcha na nkecha, kama ọ ga-ejikọkwa ya na uwe gị, ma dịkwa mma ma dị mma. E kwuwerị, ị ga-etinye awa ole na ole na ihe omume ahụ na ọbụna ma eleghị anya ịgba egwú, na ịkwanye na akpụkpọ ụkwụ na-ejighị n'aka nwere ike ịkwakasị ụtụtụ.
Ọdịdị nke nwanyị azụmahịa
Ụdị akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị - aha
Kedu ihe iji yi akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ?
Nwa agbọghọ ahụ na-eyi uwe
Uche nke odo odo
Ndị kasị mara mma n'ụwa n'ụwa 2014
Uwe maka oge okpomọkụ
Atụmatụ maka ịse foto na mmiri
Uwe ejiji maka ụmụ nwanyị zuru oke dị mkpụmkpụ
Uwe Akwa Umu Ahu
Ihe kacha mma maka oge ịse foto
Kate Middleton gosipụtara ihe osise nke nwa ya Charlotte n'ụbọchị ọmụmụ ya
Cher na-ekewa ihe nketa n'etiti ndị ikwu
Ihe ịrịba ama maka agbamakwụkwọ maka onye na-alụghị di
Akpụkpọ ụkwụ Vitacci
Kedu esi kpochapu pans na igwe anaghị agba nchara?
Mmiri na-acha odo odo n'oge ime
Candles nke colpitis
Kedu otu esi eji ezumike ezumike?
Ilekọta akị azụ
Swimwear na 2014
Ucha ejiji - oge oyi-mgbede 2016-2017
Ọkpụkpụ na afọ ime
Osimiri Cervical n'oge ime ime
Gelatin mask for hair - 4 kacha mma Ezi ntụziaka na ịtụnanya utịp
Karịa iwepụta okpokoro ihu?
Ime ime ụlọ
Nkpuchi nke ube oyibo maka ihu
Nri nri maka ọnwụ
Curd achicha - uzommeputa